Ururada ka dambeeya magacyada caalamiga ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKooxaha ka dambeeya sumcad caalami ah
26 / 07 / 2017 06 Ankara, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY, taraamka
Turkiga, ma awoodin inaan qaadanno fogaan dheer marka loo eego horumarinta shabakadaha gaadiidka. Si loo xidho yaraanta, marka ugu horreysa, waa in la dhiso habab ay gaadiidku ku rari karaan kuna imaan karaan kuna soo dhici karaan. Waxaan ku bilownay halkan qaabab kala duwan. Intaa ka dib, shaqooyinkeenna tareenka ayaa bilaabmay. Magaalooyinkeenna waxaa laga bilaabay howlo shaqo. Hadda waa waqtigii; waxay u timid inay soo saarto gawaadhi, labajibbaarayaasha, dekedaha, iyo gawaarida isticmaali doona wadooyinkan.
Maanta, qaar ka mid ah baabuurta soo saaray naqshado Turkey waxaa la sameeyey ee dalkeenna. Waxaa laga yaabaa inay jiraan naqshado halka aan ka sameysan karno boqolkiiba 100 halkan. Laakiin nashqadahaan kama tirsana waddankeena. Wuxuu leeyahay shirkadaas, astaantaas. Marka inkasta oo injineeradaadu halkaas ka shaqeeyaan; adigu ma lihid oo awood uma lihid inaad wax badbaadiso. Waa inaad ka iibsataa qeybta uu doonayo meesha uu yiraahdo. Haddii nashqadeynta iyo lahaanshaheena ay leedahay, waxaan ku soo bandhigi karnaa qeybahaas kuwa ka jaban oo laga yaabo inay ka tayo fiican yihiin adduunka oo aan ugu adeegno dadkeena iyo adduunka. Waqti ayaan ku lumnay gaariga! Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo la qaban lahaa. Waan samaynaynaa.
Shaqadii quruxda badneyd ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, waxaa la gaaray xilligii tareennada. Hore uma lihin waddo, markaa aynu wadno gawaaridan. Magaalooyinkeennu sidaa uma horumareen oo waxaan isticmaali karnaa taraamka iyo tareenka dhulka hoostiisa mara. Hadda baahi ayaa jirta. Waxa uu ahaa suuq ee Turkey sida. Waxaan rabnaa inaan soo saarno boqolkiiba boqol gawaarida maxalliga ah suuqan. Waxaa sidoo kale jira tusaalooyin guuleysta oo tan ah. İpek Böceği, Panorama, Talas, Green City LRT, magacyada Tram Istanbul. Waan ku faraxsanahay. Waxaan ku dhex soconnaa annagoo nidhaahna "wax hanti ah" oo aan ku faanno. Horumar aad u muhiim ah dalkeena.
Ma ogsoonahay sida ay muhiimka u tahay inaan qaadno kutlada? Faahfaahinta kaliya 'si 51 noqon doonaa kaalin hoose yeedhay waxaan lumin xiriiri ballan Samee ka hor, mari hore ee mAdIğImIz albaabka, shirkadaha ajnabiga ah na u yeelaan inay taaj dhammaanaya ee daqiiqadii ugu danbeysay ay ka iman haatan Turkey galay wafdiga ganacsi wada sameeyaan. Boqolkiiba 51 ee baahiyaha gudaha ayaa furmay safka hore. Tallaabo sida ay muhiimka u tahay waa daraasadaha kooxda. Xaqiiqdii, maanta waxaa jira kooxo ka dambeeya magacyada adduunka.
Waa lagama maarmaan in la dhiso qaabab adag si looga fogaado in ay saameyn ku yeeshaan mowjadaha khatarta ah in waqti la galo shaqooyinka halkaas oo qaataha badiyaa uu yahay mid dadweyne. Ujeedada ugu weyn ee qaab dhismeedkan awoodda leh; Ujeeddada kooxdu waa in la sameeyo wax soo saarro leh karti la'aan. Tusaalaha ugu wanaagsan ee tan waxaa lagu arkaa warshadaha difaaca. Sababtoo ah 20 ee warshadaha difaaca ma awoodaan inay qabtaan isla shaqadaas maalmihii 365 sanadka oo dhan. Mashaariicda waxaa loo soo saaray si waafaqsan baahiyaha Ciidamada Qalabka Sida. Waa muhiim in sidan loo shaqeeyo.
Aasaasidda Kooxda Nidaamka Raadinta Gaadiidka Anadrol (ARUS) ayaa la mid ah tan muhiimka ah sida ku darista shuruudaha 51 ee hindisada. Dhamaan dhaqdhaqaaqyadan oo dhami way isu yimaadeen oo Ankara waxay door kale ka ciyaartey magaaladan. Waxaan u joognaa Ankara sidii gawaarida nidaamka tareenka 'ayaan nidhi. Waan u qalanay tan. Waxaan uqalnay inaan dhisno kooxdan waana uqalnay sida heerka tikniyoolajiyada warshadaha Ankara.
Qiimaha kilogramka dhoofinta Ankara waa qiyaastii 23,5 dollars. Ankara waxay cadeysay inay tahay caasimada tikniyoolajiyada iyo soosaarka macluumaadka. Annaga oo ah warshadaha warshadaha Ankara, waxaan sameynay diyaaradda dagaalka. Waxaan sameynaa diyaaradda rakaabka, tareenkayaga, marinkeenna dhulka hoostiisa iyo tareenkayaga soonka. Shaqadu waa mid fudud; soo iibsiga dowladu runtii waa aaladda ugu muhiimsan marka loo eego wareejinta dakhliga iyo hagida tikniyoolajiyadeed. Soo iibsi dowladeed ma ahan oo keliya helista waxa ugu raqiisan. Mararka qaarkood helitaanka ugu qaalisan ayaa ka muhiimsan marka loo eego wax soo saarka gudaha iyo dhaqaalaha qaran.
Nidaamyada gaadiidka tareenka ayaa ah irrid shaqo oo weyn oo leh ganacsi fara badan. Halkii laga soo dejin lahaa, qayb kasta oo aan halkan ku soo saarno waxay sidoo kale noqon doontaa taageero muhiim ah xagga shaqada ee waddankan. Waxaan jecelahay inaan ugu hambalyeeyo ARUS iyo OSTİM dadaalladan oo dhan waxaanan u rajaynayaa inay sii wadaan guusha.
Xigasho: Nurettin ÖZDEBİR - Gudoomiyaha Rugta Wershadaha ee Ankara - waxaan www.ostimgazetesi.co
Iskaashiga Inter-Kooxaha ayaa lagu qiimeeyay Eso
MUSIAD Rize Madaxweynaha Taylan, Waddada Waddaniga ah Waa inaan fulinnaa
RayHaber 26.07.2017 Warbixinta Shirka